Payment karbaash operator diido Seeraar - Blockchain News
Payment karbaash processor to End Support for Seeraar
Karbaashana, operator bixinta ku dhawaaqday in ay ka tagi doono Seeraar saddexda bilood ee soo socda gudahood oo si buuxda u tanaasulaan on April 23. Tani waxaa lagu sheegay by Tababaraha saarka Tom Carlo ee shirkadda ee blog rasmi ah.
Karbaashana, waxay bilaabeen inay taageeraan xawaalad Seeraar in 2015, fidisa helitaanka lacag bitcoins muddo ka badan 60 dalalka. Si kastaba ha ahaatee, waqti dheer ah processing macaamil, in la kordhiyo tirada xawaalad guuleysan iyo kharashyada kordhaya sameeyey Seeraar yar oo caan ah ka mid ah dadka isticmaala wax karbaashana,: “Seeraar waxaa laga badiyay habboonaanta dadka isticmaala our. shirkadaha ganacsiga Wadashaqaynta ayaa sidoo kale bilaabay in ay helaan dakhli ka yar Seeraar, “- ayaa sheegay in Carlo.
Tom Carlo xusay in wax karbaashana, “rajo eegayaa crypto-lacagaha guud ahaan” iyo, suurto gal, mustaqbalka taageeri doonaa altcoins more, oo ay ku jiraan hugaaminaya, haddii qadaadiic uu noqdo more popular. Intaa waxaa dheer, uu u arko aragtida ah in mashaariicda sida hillaac, OmiseGO, Ethereum, Seeraar Cash iyo Litecoin.
Qaar badan oo dadka isticmaala shabakadda taageerto xal adeegga:
Seeraar wuxuu ku weynaa, kacaan xitaa laakiin waxaa jira si dhaqso ah, #cryptocurrencies jaban iyo ka badan oo isu soo baxay waxaa hadda. Waa waqti si aad kuwa ku kids cusub ku #Ethereum block # StellarLumens
Inkastoo qaar ka mid ah tani fal arka gaaban ka hor of hillaac iyo xalalka kale scalability oo shabag Seeraar tixgelin, dadka isticmaala inta badan weli aaminsan in ay jiraan cryptocurrencies badan oo la tartami karta Seeraar.
Waxaa jira jid ay ku soo bandhigaan news karbaash this sida war wanaagsan. Waxaan xaqiiqdii u sheegay oo dhan baayacmushtariyaasha adopter hore ay ku "hab qaldan" sameeyey oo haatan si retool ku darto network hillaac. Laakiinse iyagu ma ay tahay. Waxay tahay ma uusan u dhaqaaqin Seeraar lacag caddaan ah (ama wax kale) labada. Waxay ugu tagnay
Ha ma ayna miiqdaan turkey sida "ma ku tala bixinta waa wax kale", waxaa loola jeedaa waxaan inaan sugnaa ilaa ecosystem uu diyaar u yahay mar kale iyo mid kasta oo ka dibna te-aaso ay mar labaad marka fiiga yar yihiin mar kale. Waxay khusaysaa lacagta birta ah oo dhan, ethereum ma aha "diyaar" midkood.
xadka block waa in la soo kiciyey labo sano ka hor, ka hor mid ka mid ah waxay noqotay dhibaato dhab ah, oo aan iibsaday lahaa mar. Laakiin dadka qaarkood FUD'ed ku saabsan dhibaatooyinka mustaqbalka khayaali ah inay iska iibiso xal mustaqbalka in aan diyaar u ahayd oo abuuray arrimaha dhabta weyn ku soo gudbinaynaa. /waxaana hadalkiisii
Alex @avsa cammuudda
Horraantii December, ka Seeraar-bixinta ayaa hoos u adeega ciyaarta Steam ah. Sidoo kale guurka ka block Ethereum in Xiddigle mar hore ku dhawaaqday CEO of Rasuul KIK Ted Livingston. Sida laga soo xigtay isaga si ay u, Ethereum “isku dayo inuu noqon wax kasta oo qof walba”, aad u buux oo mar dambe dhergiyaa baahida codsiga la 10,000 users.
Kooxaha Bittrex la t ...
Post Previous:Robotrading ama Trading Buugga